Samsung Galaxy S II Ice Cream Sandwich 4.0.3 အတွက် ဇော်ဂျီဖောင့် — MYSTERY ZILLION
Samsung Galaxy S II Ice Cream Sandwich 4.0.3 အတွက် ဇော်ဂျီဖောင့်
April 2012 edited April 2012 in Android
ကျွန်တော် Samsung Galaxy S II Ice Cream Sandwich 4.0.3 ကို Odin3 ကိုသုံးပြီးအဆင်ပြေစွာနဲ ့update နှင့် root လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကတော့ Gingerbread 2.3.3 တုန်းကလိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်....
Notification bar မှာဇော်ဂျီဖောင့်သွင်းထားလို့စာလုံးတွေပြတ်နေခြင်း
Alarm setting မှာဇော်ဂျီဖောင့်သွင်းထားလို့စာလုံးတွေပြတ်နေခြင်း
Internet သုံးရာတွင်မြင်ရသော ဇော်ဂျီဖောင့်
ကီးဘုတ်ကတော့ FrozenKeyboard_1.1.3 နဲ ့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Gingerbread 2.3.3 တုန်းကလိုအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ သိတဲ့သူများရှိရင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ...
ဒီ post က(အောက်မှာ) zawgyi-mobile font နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ သူငယ်ချင်း...အဆင်ပြေလား၊မပြေလားတော့ ပြောမတတ်ပါ။အဲမှာတင်ထားတဲ့ font က zawgyi-one မဟုတ်ပါ။
zawgyi-one ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ font ပါ။သူငယ်ချင်းဖြစ်တာက အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ တွေပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ zawgyi-mobile font မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာကို သေးထားပါတယ်(ဇော်ဂျီဝမ်းနဲ့မတူ)။မြန်မာအက္ခရာကို နဂိုအတိုင်းပဲ ပြုလုပ်ထားတယ်(ဇော်ဂျီဝမ်းနဲ့ တူ)။ဒီ font ကို ဆိုနီ android phones တွေမှာ font ပြသာနာဖြစ်နေလို့ အဲသာအတွက်ရည်ရွယ်ပီး ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုမျိုးမင်းလတ်ရေ ကျွန်တော်ထည့်ပြီးစမ်းခဲ့ပြီးပါပြီ၊အဆင်မပြေလို ့ပါ။အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေက သေးသွားတယ်။ကြည့်ရတာအဆင်
မပြေဘူး။အင်တာနက်သုံးတော့လည်း ဇော်ဂျီဖောင့်လိုမျိုး စာလုံးတွေထပ်နေပါတယ်။
April 2012 edited April 2012 Registered Users, Banned Users
this is for samsung only.. what about htc.. i tried rooting my htc sensation and give up..
u can try fontchanger http://www.mediafire.com/?90p7u34lopz4e4g
try this if ur ph is rooted
I also faced this kind of problem after upgrade to ICS 4.0.3. However I just got one solution to view myanmar font in browser and facebook.
1) To see myanmar font on browser, please install "Opera Mobile Browser". ( Only this browser can see myanmar font among all type of browser ).
2) To see Facebook, please install "Friendcaster for facebook".